အလင်းခြုံတဲ့ သတင်း Zone – 44 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အလင်းခြုံတဲ့ သတင်း Zone – 44
အလင်းခြုံတဲ့ သတင်း Zone – 44
Posted by alinsett on Jul 2, 2015 in Creative Writing, Critic, Environment, History, My Dear Diary, Myanma News, Myanmar Gazette, News | 8 comments
အခုတစ်ပါတ် တင်ပြပေးမယ့် သတင်းတွေကတော့ …
လွှတ်တော်တွင်းရှိ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ထွက်ခွာပေးရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်အုံကြွမှုကြီး ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့သတင်း ၊
နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကြာ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ US အိမ်ဖြူတော်ဝင်းအတွင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်း၊
ပြည်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် စာရင်း ပေးသွင်း နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်တဲ့ US ဝါရှင်တန် ဒီစီမြို့တော်ရှိ မြန်မာသံရုံးရဲ့ ကြေငြာချက်၊
မြန်မာပြည်တွင်းက ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်တွေကို US နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံတွေဆီ တင်ပို့တော့မယ့်သတင်း၊
US တစ်ပြည်လုံးမှာ လိင်တူချင်း လက်ထပ်ခြင်း ခွင့်ပြုကြောင်း US ၊ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကနေ မဲခွဲစီရင်ချက် ချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်း၊
ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဆုတံဆိပ်တစ်ခုကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရရှိသွားတဲ့သတင်း၊
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော မြို့နယ်ထဲက လှေစီး ဒုက္ခသည် စခန်း ထဲကနေ ဒုက္ခသည်တွေ ထွက်ပြေးနေတဲ့သတင်း၊
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးနိုင်မယ့်သူတွေကို ကြေညာတဲ့ မဲစာရင်းဟာ ၇၀%လောက်အထိ မှားယွင်းနေတဲ့သတင်းနဲ့ ဒေါ်ဗအာငဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအရေး လှုပ်ရှားမှုများ ၊
US အခြေစိုက် အမှတ်တံဆိပ် KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုင်ခွဲဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့သတင်း၊
မြန်မာနဲ့ မွန်ဂိုလီးယား နှစ်နိုင်ငံကြား – ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်တွေ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မွန်ဂိုလီးယားခရီးစဉ်အကြောင်း ၊
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရသူတွေ များပြားလာတဲ့ မြန်မာပြည်သူ လူထုရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေသတင်း ၊
US ၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ နှစ်ပတ်လည် လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာနဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ တုန့်ပြန်ပြောဆိုမှုများ…
US မှာ ပြုလုပ်မယ့် ပွဲလမ်းသဘင်ဆိုင်ရာ သတင်းများနဲ့ ထူးခြား သတင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၂ ။
မြန်မာပြည်တွင်းက ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်တွေကို US နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံတွေဆီ ပမာဏအနေနဲ့ တိုးမြှင့်တင်ပို့တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စိုက်ပျိုးတဲ့ ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ႓ာ့ဆန်စပါးညီလာခံအတွင်း ကမ႓ာ့အကောင်းဆုံးဆန်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး အခုလက်ရှိ ပြည်ပသို့ တင်ပို့တဲ့ ပေါက်ဈေးကတော့ ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန် တစ်တန်ကို ဒေါ်လာ ၉၀ဝ ကနေ ၁၀ဝ ထိ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆင့်မှီ ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်တွေကို မိုးနည်းဒေသဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုနယ်မှ ထွက်ရှိပြီး၊ ပဲခူးတိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာလည်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်အနေနဲ့ မတ်လမှာ ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆန်စပါးများ ပြည်ပကို တင်ပို့မှုဟာ တန်ချိန် ၂ သန်း ရှိခဲ့တာကြောင့် ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထက် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။
US သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်အတွင်း ဝင်ရောက် လေ့လာမယ့် အများပြည်သူတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာာဟာ နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကြာခဲ့ရာကနေ ဇူလိုင် ၁ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီး အဆိုပါ ကန့်သတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်ဝင်းအတွင်း ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခွင့် ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းကို US သမ္မတ ကတော် မစ်ရှယ်လ် အိုဘားမားက အင်စတာဂရမ်မှာ ဗီဒီယိုသတင်းနဲ့ ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်ခေတ်တွေတုန်းက ဖလက်ရှ်ဂန်းလို့ ခေါ်တဲ့ လျှပ်တစ်ပြက်မီးရောင်တွေကြောင့် အိမ်ဖြူတော်အတွင်းရှိ သမိုင်းဝင် အနုပညာလက်ရာ၊ ပန်းချီကား စသည်တု့ိ ထိခိုက်ပျက်စီးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားခဲ့တာ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ ကာလမှာတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် ပြုလိုက်တဲ့အပြင် အိမ်ဖြူတော်အတွင်းမှာ မိမိတို့ ရိုက်ကူးသွားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို တွစ်တာပေါ်မှာ @WhiteHouse တက်ဂ်နဲ့ ဖြန့်ဝေနိုင်ကြောင်းလည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ပိတ်ပင်မှုတချို့တော့ ဆက်လက် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ကင်မရာများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများနဲ့ ရိုက်ကူးရာမှာ ဖလက်ရှ် မသုံးရဘူးဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ဗီဒီယိုကင်မရာများနှင့် streaming video ခေါ် တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုများကိုလည်း ခွင့်မပြုသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မှန်ဘီလူးအရှည် ၃ လက်မ (၇.၆ စင်တီမီတာ) အထိ အပေါ့စားကင်မရာများကိုသာ ယူဆောင်ခွင့် ပေးထားတာကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ရိုက်ကူးသော ဓာတ်ပုံများအတွက် လက်ကိုင်ဖုန်းမှာ တပ်ဆင်မယ့် တုတ်တံတွေကိုလည်း အသုံးပြုခွင့် မပြုကြောင်း သိရပါတယ်။
ဇူလိုင် ၁ ။
၂၀၀၈ တုန်းက နာဂစ် သဘာဝဘေးဒဏ် သင့်ချိန်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒမပါဝင်ပဲ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ပေးရေးနဲ့ လွှတ်တော်တွင်းရှိ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ထွက်ခွာပေးရေးတို့အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်အုံကြွမှုကြီး ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှကျောင်းသား ၅ဝခန့်နဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဝန်းရံပေးတဲ့ ပြည်သူများ စုပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့လည်မှာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၃ဝရက် ညနေ ၃နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့လည်ရှိ သိမ်ကြီးဈေးမှ စတင်ခဲ့ပြီး ဟောပြောမှုတွေလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သိမ်ကြီးဈေးကနေ စတင်ထွက်ခွာချိန်ကတည်းက ရဲတပ်ဖွဲ့တွေက အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ပိတ်ဆို့ တားဆီးနေခဲ့တဲ့အပြင် လူစု ခွဲဖို့ ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေကတော့ အတားအဆီးတွေကို အတင်းတိုးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရရဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုတွေ တောက်လျှောက် ပြုလုပ်နေတာကို မြင်ရတဲ့ ပြည်သူတချို့ကလည်း ကျောင်းသားတွေ ဘက်က ဝန်းရံကူညီပေးတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့အရောက်မှာတော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ပေးရေးနဲ့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ စစ်တန်းလျားမပြန်ဘဲ စစ်သားနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ဥပဒေပြုရေး ဝင်လုပ်နေတဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ရာခိုင်နှုန်း မရှိစေရေးတို့ အတွက် ဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလို ရုတ်တရက် ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကို အစိုးရထံက ခွင့်ပြုချက် ကြိုတင်မတောင်းခံဘဲ ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာအစိုးရရဲ့ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈နဲ့ အရေးယူ ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းတုန်းက လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး အဆိုပြုချက်များ အငြင်းပွါးဖွယ်ရာ ကျရှုံးပြီးချိန်မှာပဲ အခုလို ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုများ ပေါ်ပေါက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလောလောဆယ်အထိတော့ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အထဲက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ တကသအဖွဲ့ဝင် ကိုဇေယျာလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကိုနန်းလင်း၊ ကိုရဲဇာနည်ထွန်းနဲ့ ကိုမင်းသုကျော်တို့ ၅ ဦးကို ပန်းပဲတန်းနဲ့ ကျောက်တံတား ရဲစခန်းတွေက ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ပြင်သစ် သမ္မတဟောင်း Charles de Gaulle ကနေ (၁၉၆၃) ခုနှစ်က စတင် တည်ထောင်ပြီး ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဆုတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ National Order of Merit ဆိုတဲ့ စွမ်းရည်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရရှိသွားကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်အနေနဲ့ အခုလို အဆင့်မြင့် ဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံရတာဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှု၊ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့ တော်လှန်သော အနုပညာရှင် စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီးက ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို US ရှိ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ Martin Luther King, Jr. ဆိုသူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဂုဏ်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကို ပြန်လည် ပို့ဆောင်ဖို့ စိစစ် နေဆဲဖြစ်တဲ့ လှေစီး ဒုက္ခသည် ၅၀ဝ ကျော် ယာယီနေထိုင်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော မြို့နယ်ထဲက တောင်ပြို လှေစီး ဒုက္ခသည် စခန်း ထဲကနေ ဒုက္ခသည်တွေ ထွက်ပြေးနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းကနေ ထွက်ပြေးကြသူတွေဟာ အခုရက်ပိုင်းမှာပဲ (၁၀) ယောက် ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ နေရပ်ကို ပြန်ပို့ိုနိုင်ဖို့ စိစစ်နေတာ ၁ လ ကျော်နေပြီ ဖြစ်ပြီး လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေဟာ လှေတွေပေါ်မှာလည်း ၃ လ လောက် ကြာမြင့်စွာ နေခဲ့ရတဲ့အတွက် အိမ်ပြန်ချင်စိတ်နဲ့ အခုလို ထွက်ပြေးနေကြတာ ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် – မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ထဲကနေ ဆယ်ယူ ထိန်းသိမ်းထားရတဲ့ လှေစီးဒုက္ခသည်တွေဟာ အရေအတွက်အားဖြင့် ၉၀ဝ ကျော် ရှိနေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက တောင်ပြို စခန်းမှာ ရှိနေပါတယ်။
အခုချိန်ထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘက်ကို ပြန်လည် လွှဲပေးလိုက်တဲ့ လှေစီးပြေးဒုက္ခသည် ဦးရေဟာ (၂၀၀)ခန့် ရှိသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဇွန် ၂၇-၃ဝ ။
ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတချို့ ပူးပေါင်းပြီး ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ နယ်မြေတချို့ကို စမ်းသပ်နယ်မြေများအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ အခြေခံမဲစာရင်းတွေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနေပါတယ်။
အဆိုပါ စစ်ဆေးမှုအချက်အလက်တွေအရ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးနိုင်မယ့်သူတွေကို ကြေညာတဲ့ မဲစာရင်းဟာ ၇၀%လောက်အထိ မှားယွင်းနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အခုလို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် တချို့ရပ်ကွက်တွေထဲ ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲတွေရှိနေပြီး ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တွေက တားဆီးပိတ်ပင်တာတွေကို ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီကလည်း နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မဲစာရင်းတွေကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ NLD ပါတီဝင်နှစ်ဦးဟာ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မူနဲ့ အရေးယူခံထားရကြောင်း သိရပါတယ်။
စာရင်းကောက်ယူမှုတွေအရ နေပြည်တော်ရှိ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်မှာ လူဦးရေ ၄ သောင်းဝန်းကျင်လောက်ဟာ မဲစာရင်းကနေ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အလုံမြို့နယ်ထဲက မဲစာရင်းမှာတော့ စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ ကိုပါကြီးက မဲစာရင်းထဲ ပါဝင်နေပြီး သက်ရှိထင်ရှား ဖြစ်တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မသန္တာကတော့ မဲစာရင်းမှာ မပါဘူးလို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံကျော်တေးသံရှင် ဖြူဖြူကျော်သိန်းလည်း သူမ နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်ရုံးမှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ မဲစာရင်းထဲ မပါဝင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူတွေကို မဲစာရင်း မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးကြဖို့အရေး တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း လိုက်လံတိုက်တွန်း ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
မဲစာရင်းထုတ်ပြန်ရာမှာ အမှားတွေ အကြီးအကျယ်ရှိနေတာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ အမှားတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် အသိပညာပေး အချက်အလက်များပါဝင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် လိုက်လံ ဝေငှနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန် ၂၈ – ၂၉ ။
US အခြေစိုက် အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်တဲ့ KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုင်ခွဲဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ကြက်ကြော်ဆိုင်ကို ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအရှေ့နားမှာ ဇွန်လကုန်က စပြီး ဖွင့်လှစ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
US အခြေစိုက် KFC အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ဆိုင်ခွဲများကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ ဖွင့်နေရတဲ့ အထိ အောင်မြင် နေကြောင်း သိရပါတယ်။
KFC မှ စားသောက်ကုန်တစ်ပွဲဟာ ပျှမ်းမျှ ကျပ်ငွေ ခြောက်ထောင်လောက် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ဒါဟာ ၅ ဒေါ်လာ ကျော် ဖြစ်နေတာမို့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ပြည်သူအားလုံး လက်လှမ်းမှီစားသောက်နိုင်တဲ့ဈေး ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ ကျပ် ၃၆၀ဝ သာ ရှိတဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေဟာ KFC မှ ကြက်ကြော် တစ်ပွဲစားရဖို့အတွက် တစ်ရက်ခွဲစာလောက် လုပ်အားခတွေ ပုံပေးရမယ့် အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။
ဇွန် ၂၉ ။
မြန်မာပြည်မှာ မကြာခင် ကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ အခု လာမယ့် အောက်တိုဘာလကုန် နဲ့ နိုဝင်ဘာလဆန်းမှာ ကျင်းပဖို့ ရှိနေပြီး ပြည်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် စာရင်း ပေးသွင်း နိုင်ကြောင်း US ဝါရှင်တန် ဒီစီမြို့တော်ရှိ မြန်မာသံရုံးက ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တရားဝင်ရောက် ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတွေဟာ မဲစာရင်းပေးသွင်းနို်င်ကြောင်း ကြေညာထားပါတယ်။
US ကို ရောက်ရှိ နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံး၊ နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ ကယ်လီ ဖိုးနီးယားပြည်နယ် – လော့အိန်ဂျလိစ်မြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံး… စတဲ့နေရာတွေကို လာရောက်ပြီး စာရင်းပေးသွင်းနို်င်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မဲစာရင်း ပေးသွင်းခြင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများအနေနဲ့ www.mewashingtondc.com ဆိုတဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာလည်း ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနို်င်ပါတယ်။
မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မွန်ဂိုလီယားသမ္မတ Tsakhiagiin Elbegdorj ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ကနေ ၃ဝ ရက်နေ့အထိ မွန်ဂိုလီယားနိုင်ငံဆီ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မွန်ဂိုလီယား ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ မွန်ဂိုလီယားသမ္မတ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့ တရားဝင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး
မြန်မာနဲ့ မွန်ဂိုလီးယား နှစ်နိုင်ငံကြား – ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်တွေ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း မွန်ဂိုလီးယားသမ္မတ က သတင်း ထုတ်ပြန် ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြား အပြန်အလှန် အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အပြင် လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အတူ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ့်အကြောင်းကို သမ္မတနှစ်ဦးက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပူးတွဲ ပြုလုပ်ပြီး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ မွန်ဂိုလီးယားတို့ဟာ သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍ ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ အခြား ကဏ္ဍပေါင်းများစွာမှာလည်း နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၅ ရက် နေ့စွဲနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်တဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်ကို ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်က ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေထဲက အခန်း (၄) ဟာ အဓိကအငြင်းပွားစရာဖြစ်နေပြီး မူလတုန်းက ဥပဒေအတိုင်း ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျောင်းသားတွေ အဓိကတောင်းဆိုထားတဲ့ ပညာရေးမှာ အစိုးရရဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်လျော့ချရေးဆိုတဲ့ အချက်ဟာလည်း အခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေမှာ မပါဝင်ကြောင်း ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် ဗကသ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ကိုလင်းထက်နိုင်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတုန်းက သဘောတူညီချက်အရ ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို (၅) နှစ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာငွေ (၂ဝ%) အထိသုံးစွဲမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြင်ဆင်ရာမှာလည်း ပညာရေးဥပဒေမှာ ၂ဝ % အထိ ရောက်ရှိရေး ရည်မှန်း သုံးစွဲမယ်လို့သာ ဆိုထားပေမယ့် နှစ်ကာလနဲ့ အချိန်အတိအကျ ဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အဲဒီနောက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို လေးပွင့်ဆိုင် သဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါဆိုပြီး ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNER က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကာ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အခု ပြန်လည် ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေဟာ စကားလုံးတွေကိုသာ ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်ပြီး အနှစ်သာရကတော့ ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ NNER က ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဇွန် ၂ရ ။
US တစ်ပြည်လုံးရှိ လိင်တူချင်း လက်ထပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုကြောင်း US ၊ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကနေ မဲခွဲစီရင်ချက် ချမှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
US တရားရုံးချုပ်ရှိ တရားသူကြီးများရဲ့ ထောက်ခံမဲ ၅ မဲနဲ့ ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၄ မဲတို့ဟာ US ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ လွတ်လပ်စွာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခွင့် ရှိရေးကို အာမခံချက် ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမေရိကန် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်တောင်းဆိုနေကြတဲ့ လိင်တူလက်ထပ်ခွင့်ကို တရားဝင် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ကျေနပ်သဘောကျတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒါဟာ US ပြည်ထောင်စု ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရဲ့ စီရင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်နယ်တရားရုံးတွေအနေနဲ့လည်း လိင်တူစုံတွဲများ လက်ထပ်ခြင်းကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပေးရတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
US ရှိ ပြည်နယ် ၅ဝ ထဲက ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ ကြီးစိုးနေတဲ့ ပြည်နယ် ၁၃ ခုအတွင်းမှာလည်း လိင်တူချင်း လက်ထပ်တာကို ပိတ်ပင်ထားရာကနေ အခုလို တရားဝင် ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့ မည်သည့်ပြည်နယ်မဆို ခွင့်ပြုရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
US ကို ရောက်ရှိကာ အခြေချ နေထိုင်လျက်ရှိုတဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွားများအတွင်းမှာလည်း လိင်တူချင်း လက်ထပ်လိုသူများ ရှိနေတာကြောင့် အခုလို လိင်တူချင်း လက်ထပ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက်မှာ မိဘ အုပ်ထိန်းသူများအနေနဲ့ ကြိုတင် စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားသင့်တာတွေ ရှိလာပြီလို့ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့နေ မြန်မာ တချို့က သုံးသပ်နေပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ၇၀၀ဝ ကျော် ကနေ ၉၀၀ဝ လောက်အထိရှိလာပြီး လွန်ခဲ့တဲ့အပါတ်အတွင်းမှာပဲ မြန်မာပြည်သူပေါင်း ၄ဝ လောက် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရမှုကို အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရပြီး အထူးသဖြင့် အသက် ၃ နှစ်နဲ့ ၉ နှစ်အရွယ် ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတာကိုတွေ့ရကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သိရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်အရ ငယ်ရွယ်သူတွေမှာသာ အဖြစ်များပေမဲ့ အခုအခါမှာတော့ လူကြီးတချို့မှာပါ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွါးလာတာကို တွေ့လာရတဲ့အတွက် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဟာ အသက်အရွယ်မရွေး ရာသီမရွေး ဖြစ်ပွါးနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကမာ္ဘ့အပူပိုင်းဒေသ အနီးအနားဝန်းကျင် ဒေသများအတွင်း နေထိုင်သူ လူပေါင်း သန်း ၅ဝ ကနေ ၁၀ဝ လောက်ဟာ ခြင်မှတဆင့်ကူးစက်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်မှုကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွါးတဲ့အခါမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားနဲ့ အရိုးအစစ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများ ခံစားရပြီး ဝက်သက်ပေါက်သလိုမျိုး အရေပြားပေါ်မှာ အစက်အပြောက်များ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွါးတဲ့အခါ ၃ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်ထိ ခံစားရပြီး မြန်မာပြည်မှာတော့ မိုးရာသီဖြစ်တဲ့ ဇွန်လကနေ စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ အဖြစ်များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေထဲမှာ အရှုပ်ထွေးဆုံးနဲ့ အန္တရာယ်အပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကို တရုတ်- မြန်မာနယ်စပ်ဒေသအတွင်း ပုံမှန်သွားလာနေတဲ့ ထရပ်ကား ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနေ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ရောဂါသည်ကို တရုတ်သိပ္ပံ ပညာရှင်များက ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်ရာ AIDS ရောဂါဆိုင်ရာ သုတေသနဆေးပညာဂျာနယ်တွေထဲမှာ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါပိုး တွေ့ရှိတဲ့ အဆိုပါ ယာဉ်မောင်းဟာ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုအမှတ် အများအပြား တွေ့ရှိထားသူဖြစ်ပြီး သူဟာ HIV ရောဂါပိုး ရှိသူ ပြည့်တန်ဆာ အများအပြားနဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံမှန်ပြုလုပ်သူ ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ယာဉ်မောင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဇာတိမှ ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်တောင်ပိုင်းနဲ့ အခြားဒေသတွေဆီကို မကြာခဏ ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသနအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အဆိုအရ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဟာ HIV ရောဂါပိုး မျိုးဗီဇပြောင်းလဲတဲ့ အဓိကနေရာ တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အပြင် တရုတ်- မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသမှာ မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရာ ဒေသအဖြစ် လူသိများတာကြောင့် HIV ကူးစက်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးထိုးသွင်းမှုပြုလုပ်သူ များပြားနေတဲ့ ဒေသလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဇွန် ၂၆ ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ွင်းက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေဟာ နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ အခြေ အနေ ရှိနေကြောင်း US ၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ နှစ်ပတ်လည် လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာ မှာဖေါ်ပြခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက ရှုပ်ဖွေးလှတဲ့ ပြဿနာတွေကို နေချင်းညချင်း ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ကြောင်းနဲ့ လက်ရှိအစိုးရ အနေနဲ့ ဒေသတွင်း လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း မြန်မာအစိုးရဘက်က တုန့်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
US နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အဆိုပါလူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာအတွင်းမှာ မြန်မာပြည်ဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများအပြား ပြန် လွှတ်ပေးခြင်းနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကိစ္စကို လုပ်ဆောင်နေတာတွေ ရှိပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အစိုးရဘက်က လူသားချင်းစာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုတော့ ကန့်သတ်မှုတွေ ရျှနေကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာလို့သာ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံမဲ့မူဆလင် လူနည်းစုကို တန်းတူညီမျှ အပြည့်အဝပေးပြီး နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ပြုပေးဖို့ မျှတတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မြန်မာအစိုးရက ချမှတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း US နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာမှာ ထောက်ပြထားကြောင်း သိရပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်တွေနေတဲ့ ဒေသများအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးမှုများ ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ … စသည်ဖြင့် ဒေသခံအာဏာရှိသူတွေက ကျူးလွန်နေခြင်းကို အလေးအနက်ထားပြီး ဖေါ်ထုတ်အရေးယူမယ့်အပိုင်းမှာ အားနည်းနေကြောင်းလည်း ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် မြန်မာပြည်တွင်းမှာ လွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်… သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့် … လွတ်လပ်သော ဘာသာရေးကိုးကွယ်ခွင့်များအပေါ် ကန့်သတ်တာတွေ ဆက်ရှိနေတာကို မြင်ရကြောင်းလည်း US နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
US ၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ၊ အမာရီလိုမြို့ ရှိ ၊ ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာအတွင်းမှာ ရှင်ပြု ရဟန်းခံ အလှုတော် မင်္ဂလာကြီး ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ အလှူတော်မင်္ဂလာကို ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ကနေ စတင်ပြီး ၂ ရက်တိုင်အောင် မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးစံများနဲ့ ကျင်းပမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကြွရောက်ပါဝင် ကုသိုလ်တော် ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများအနေနဲ့ ဖုန်း – 806 373 1346, 806 674 5927 ကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
US ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ သာသနာ့ရောင်ခြည်ကျောင်းတိုက် တည်ရှိရာ 11844 Cherrylee Dr., Ei Monte CA 91732 မှာ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက် မနက် ၁ဝ နာရီတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲ၊ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လမွေးနေ့ရှင်များရဲ့ စုပေါင်း အလှူပွဲလည်း ကျင်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာမိတ်ဆွေများ ကြရောက်ပါဝင် ကုသိုလ်ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်။
သေးစိတ် သိရှိလိုသူများအနေနဲ့ ဖုန်း – (626) 454-4203 ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
US ၊ တက်ခ်ဆက်ပြည်နယ်၊ ဟူစတန်မြို့၊ ဇေယျဝတီ ဗုဒ္ဓဝိဟာရ ကျောင်းတိုက် တည်ရှိရာ 14910 Welcome Lane, Houston, TX 77014 မှာ ဗုဒ္ဓပူဇနိယမင်္ဂလာနဲ့ စုပေါင်းရှင်ပြု ရဟန်းခံပွဲကြီး ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါပွဲကြီးကို ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ကနေ ၅ရက်အထိ ၂ ရက်တိုင် ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာမိတ်ဆွေများ ကြွရောက်ပါဝင်နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများအတွက် ဇေယျဝတီ ဗုဒ္ဓဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်- ဖုန်း – 281 988-5935 ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အသင်းရဲ့ ရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော်တစ်ရပ်ကို US ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဖြစ်တဲ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်၊ စနေနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော်အတွင်းမှာ မြန်မာစားသောက်ဖွယ်များ ရောင်းချမယ့်အစီအစဉ်အပါအဝင် အဆိုအက၊ တေးဂီတ အစီအစဉ်တွေလည်း ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပမည့်နေရာကတော့ Family Asia Market, 8800 East Colfax Denver CO, 80220 ဖြစ်ပြီး ဈေးပွဲတော်မှာ ပါဝင်ရောင်းချလိုသူ၊ အဆိုအကနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်လိုသူ၊ ကာရာအိုကေ သီဆိုလိုသူများအနေနဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းတွေကတော့ ဦးသန်းလွင် (720-767-6336) ၊ ကိုဂျွန် (720-839-9905) တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အပတ်စဉ် ရုပ်သံ သတင်းကြေညာချက်များအဖြစ် ကြည့်ရှု နားဆင်နိုင်ပါကြောင်းးးး
ထူးမခြားနား သီချင်း ဆိုမနေကြပါနဲ့လို့…
သများလည်း မဲစာရင်း စစ်ချင်တာ ဘယ်သွား စစ်ရမှန်း မသိဝူး
.fhat thwar bar del da nyin wet yae. :))
မြန်မာပြည်မှာ စိုက်ပျိုးတဲ့ ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ႓ာ့ဆန်စပါးညီလာခံအတွင်း ကမ႓ာ့အကောင်းဆုံးဆန်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး
အဲဒီသတင်းက.. မှန်တော့မှန်တယ်..။ မှန်ကြီးဟေ့…လို့ပြောရမလိုလိုပါပဲ..
ဒါပေမယ့်…. ကမ္ဘာလို့နာမယ်ကောက်တပ်ရအောင်.. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအားလုံးပါမပါတော့မသိ..
အဲဒီထဲ.. ၃ခါက.. ကမော္ဘဒီးယားဆန်ကရထားသတဲ့….
နောက်နှစ်ကျ… စင်္ကြာဝဌာအကောင်းဆုံးဆန်ဆိုပြီး.. ငစိန်ရယ်.။ ဧည့်မထရယ်.။ ပေါ်ဆန်းမွှေးရယ်ဝင်ပြိုင်ပြီး.. ငစိန်ကိုပေးလိုက်မကောင်းဘူးလားလို့… တွေးမိ..။
ပေါ်ဆန်းမွှေးကို ယူအက်(စ) နဲ့ စလုံး ကို အိတ်စပွတ်မယ်ဆိုလား နစွန်နဖျား ကြားမိ။
မနှစ်ကတည်းက.. ယူအက်စ်ကို.. ပေါ်ဆန်းမွှေးရောက်နေပြီဗျ..။
သတင်းစာထဲတောင်ကြော်ငြာထည့်သေး…။ ယူအက်စ်ဆန်ရှင်ကိုဘယ်လိုဖြတ်လာသလည်းမသိပေမယ့်.. သွင်းတဲ့မိသားစုဝင်.. တယောက်က.. အီရတ်မှာကျသွားတဲ့..မရိန်းတပ်သားမို့.. အထူးခွင့်အရေးများရလားတော့မသိ..။
သူတို့သွင်းတာ.. ပုသိမ်ပေါ်ဆန်းမွှေးတော့မဟုတ်… ရွှေဘိုတဲ့…။
ကြည့်ရတာ..မြန်မာမိသားစုတွေချည်းထိုင်စားတာနဲ့.. ဖြုန်းအားနဲ့.. ရောင်းပေးနိုင်အားမမျှ…။
မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်ဆန်းအကောင်းဆုံးက ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဖြစ်နေပြီ။
ပုသိမ်၊ ဖျာပုံ၊ မြောင်းမြ ပေါ်ဆန်းတွေထက် အများကြီး ဈေးပိုကြီးတယ်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပေါ်ဆန်းတွေက အခု တစ်တင်းခွဲတစ်အိတ်ကို ၄၀၀၀ဝ လောက်ရှိရင် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းက ၅၀၀၀ဝ ကျော် ၆၀၀၀ဝ ပတ်လည်လောက်ရှိတယ်။
ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အသွေးနဲ့ ပက်ကင်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီး ထိုးဖောက်ဖို့ လုပ်နေကြတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ စရောင်းနေပေမယ့် အပြင်မှာ အလွတ် ပြည်ချိန်နဲ့ ဝယ်စားတာထက် ပါကင်နဲ့ရောင်းတဲ့ဈေးကကွာတော့ ကိုယ်တိုင်တော့ ပါကင်လွတ် (ပြည်ချိန်၊ အိတ်ဆွဲ) ပဲ ဝယ်စားတယ်။
ဝါရှင်တန်မြို့VOA မြန်မာဌာနကို ကြွရောက်လာတဲ့ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက ကို ဦးကျော်ဇံသာက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြလုပ်ဖို့ဆိုပြီး စီစဉ်နေပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကာလကို ဘယ်လို မှန်ကန်တဲ့ သဘောထားမျိုးထားပြီးတော့ ဖြတ်သန်းရမယ်လို့ အရှင်ဘုရား ထင်ပါလဲဘုရား။
ဆရာတော် ။ ။ အခုလောလောဆယ် အရေးကြီးဆုံးကတော့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး တယောက်မကျန် မဲစာရင်း ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ပါလို့ မှာကြားချင်ပါတယ်။ ဒီမဲစာရင်းမှာ အမှားအယွင်းတွေကို သိပ်ကိုများလွန်အားကြီးနေတယ်ဆိုတာ သိရတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့် မဆုံးရှုံးဖို့အတွက် မဲစာရင်းကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလူတစု ကောင်းကျိုးကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့လူတွေ၊ တိုင်းပြည်ကို ဦးမဆောင်ဘဲနဲ့ လူထုကောင်းကျိုးကို ဦးစားပေးတဲ့လူတွေကို ဦးဆောင်စေချင်တယ်ဆိုရင် အခုလောလောဆယ် မဲစာရင်း ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပါ။ မဲပေးရမယ့် ရွေးကောက်ပွဲရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေ မဲပေးဖြစ်အောင် မဲပေးပါလို့ ဦးပဉ္ဇင်းက ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလို ပြောလိုက်လို့ နိုင်ငံရေးစကားထင်မယ်။ ဘာသာရေးစကားဖြစ်အောင် ဘာသာရေးနယ်ပယ်က စကားလုံးပါမှ လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံသားတယောက် ဖြစ်နေပြီးတော့ မဲစာရင်းသွားမကြည့်ဘူး။ မဲမပေးဘူးဆိုရင် အဲဒါ အကုသိုလ်ပဲ။ မဲစာရင်း သွားကြည့်တယ်။ မဲပေးတယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်ပါပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။